ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့် | Danya Wadi
»မှတ်စု»ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့်
ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့်
Posted by danyawadi on January 7, 2013 in မှတ်စု, သူ့အကြောင်း, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါးများ, ပေါ်လစီ
မမေးလည်းဖြေ(၁၄)- ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့်
ဇန်နဝါရီ ၇ ၊၂၀၁၂
(ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုတဲ့စကားကို အစ္စလာမ့်အတွင်းအပြင် နှစ်ဖက်လုံး စတင်ပြောဆိုနေတာ ကြားလာရလို့တဲ့ ဒီဘာသာပြန် ဆောင်းပါးကို M-Media ကို ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ )
ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့် ဂျိဟာ့ဒ် ( ဖန်ဆင်းရှင်၏နှစ်မြို့မှုအလို့ငှါ မကောင်းမှုအား ဆန့်ကျင်ရာ၌ ရုန်းကန်အားထုတ်ခြင်း )
လက်ဦးပထမဆုံးဆိုရမည်မှာ ဂျိဟာ့ဒ် ဟူသည် မြင့်မြတ်သောစစ်ပွဲ – Holy War မဟုတ်ပါ။ ဂျိဟာ့ဒ်၏ဆိုလိုရင်းအနှစ်သားမှာ – ဖန်ဆင်းရှင်၏နှစ်မြို့မှုအတွက် မကောင်းမှုအားဆန့်ကျင်ရာ ၌ (ရေကုန် ရေခမ်း) ရုန်းကန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ကုရ်အာန့်သတင်းစကားများအနက် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ဂျိဟာ့ဒ်၌ မူဟန်သွင်ပြင် များစွာရှိ၏။ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ဆွ)က မိမိ၏ဆွေသဟာများအား ဤသို့ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
” အကြီးမားဆုံးသော ဂျိဟာ့ဒ် ဟူသည် မတရားသည့်အုပ်ချုပ်သူရှေ့မှောက်၌ မှန်ရာကိုပြောဆိုခြင်း ဖြစ်၏ ”
တစ်ဖန် သူပျိုတစ်ဦးသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ထံသို့ လာရောက်ပြီး မုစ်လင်မ်ထုအား ကာကွယ်ရေးအတွက် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ စစ်မြေပြင်သို့လိုက်ပါလိုကြောင်း ခွင့်ပန်လျှောက်ထားခဲ့၏။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ)က သူ့အား မိဘနှစ်ပါးရှိပါသေးသလောဟု မေးမြန်းတော်မူရာ ၄င်းက မိမိထံ၌ (အိုမင်းမစွမ်းသော) မိဘနှစ်ပါး သက်ရှိထင်ရှား ရှိသေးကြောင်း လျှောက်တင်၏။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်မြတ်က ယင်းသူပျိုအား မိဘနှစ်ပါးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ဂျိဟာ့ဒ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ အစ္စလာမ့်ဥပဒေ ကျမ်းဂန်များ၌ စစ်ရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကြိုပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပါ ခြုံငုံဖော်ပြထား၏။ ဥပမာ – မိမိ သို့မဟုတ် တစ်ပါးသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ မိမိ သို့မဟုတ် တစ်ပါးသူ၏ မိသားစုအား အကာအကွယ်ပေးခြင်း စသည်များ ဖြစ်ကြသည်။
ဤကဏ္ဍတွင် လက်နက်စွဲကိုင်ကြိုးပမ်းရသည့် ဂျိဟာ့ဒ်အမျိုးအစားတစ်ခုကို တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ၄င်းကို ကိသာ့လ် ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ပထမဦးစွာ ဂျိဟာ့ဒ်နှင့်စပ်လျဉ်းသော ကုရ်အာန်၏ အဆိုများကိုလည်းကောင်း၊ ၄င်းနောက် အစ္စလာမ့်ဥပဒေရှိ လက်နက်စွဲကိုင်ကြိုးပမ်းမှု (ကိသာ့လ်) ၏ကျင့်ဝတ် စည်းမျဉ်းများကိုလည်းကောင်း၊ ၄င်းနောက် ဂျိဟာ့ဒ်နှင့် အစ္စလာမ့်ဥပဒေကြားရှိဆက်နွယ်မှုဖြစ်သော ဂျိဟာ့ဒ်၏ရည်ရွယ်ချက်သရုပ်မှန်ကိုလည်းကောင်း၊ ၄င်းနောက် အစ္စလာမ့်ထုံးဓလေ့မှပြဆိုထားသော သာသနာ့ အာဇာနည် အကြောင်းသာမက ဂျိဟာ့ဒ်နှင့်ခေတ်သစ် ကမ္ဘာအကြောင်းကို တစ်ဆင့်ချင်း တင်ပြသွားပါမည်။
ဂျိဟာ့ဒ်၏ အဓိပ္ပါယ်အမှန် နှင့် သဘောတရားများ
အစ္စလာမ်သည် မတရားမှုကိုအားမပေးသည့် သာသနာဖြစ်သည်။ မုစ်လင်မ်တို့သည် ဂျိဟာ့ဒ် အားဖြင့် အသက်ဘဝ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်များကို တန်ဖိုးထား ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ဂျိဟာ့ဒ်၏အကိုင်းအခက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သော လက်နက်စွဲကိုင်ကြိုးပမ်းမှု – ကိသာ့လ် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုရ်အာန်မှ မည်သို့ဆိုထားပုံကို လေ့ လာကြည့် ပါလေ။
အသက်ဘဝ နှင့် သာသနာအပေါ် ကာကွယ်ခြင်း
ကုရ်အာန်၏ ပထမဆုံး ကိသာ့လ်ဆိုင်ရာ အာယသ်တော်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။
ထို့ပြင် အသင်တို့သည် အသင်တို့အား (စတင်)တိုက်ခိုက်သူတို့နှင့် အလ္လာဟ့်လမ်းတော်၌ ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်ကြကုန်။ သို့ရာတွင် စည်းကမ်းများကို ကျူးလွန် ချိုး ဖောက်ခြင်း မပြုကြကုန်နှင့်။ မုချဧကန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူများကို နှစ်သက်တော်မူသည် မဟုတ်ချေ။ ( ကုန်အာန် ကျမ်း၂း၁၉ဝ )
ကိသာ့လ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုရ်အာန်က စလျှင်စချင်း လက်နက်ကိုင်စွဲအားထုတ်မှုမှာ မိမိ ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရေးအဖြစ်သာ ဖော်ပြလျက် အလွန်အကျူးလွန်ကဲမှုများကို ပွင့်လင်းပြတ်သားစွာ တားမြစ် ထားပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဤသို့လည်း ဆိုထားပြန်၏။
၄င်းနောက် ထို (ကျူးကျော်စော်ကား) သူတို့အား လက်ရဖမ်းဆီး၍ မိရာအရပ်၌ သုတ်သင်လိုက်ကြကုန်။ ၄င်းပြင် ၄င်းတို့အား အသင်တို့ကို (ဇာတိနေ ရပ်မှ) မောင်း ထုတ်ခဲ့သကဲ့သို့ အသင်တို့ကလည်း ၄င်းတို့ကို (ယင်းဇာတိနေရပ်မှ) နှင်ထုတ်ကြကုန်။ အကြောင်းသော် ညှင်းပန်းနှိပ် စက်ခြင်းသည် အသက်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း ထက်ပင် ပိုမိုဆိုးရွား၍ဖြစ်သည်။ သို့ငြား ၄င်းတို့က မတ်စ်ဂျိဒိလ်ဟရာမ် (မက္ကဟ်ရှိဝတ်ကျောင်းတော်) အတွင်း အသင်တို့အား စတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုသမျှ အသင်တို့သည် ၄င်းတို့ကို မတိုက်ခိုက်ကြကုန်နှင့်။ သို့သော် ၄င်းတို့က အသင်တို့အား စတင် တိုက်ခိုက်ပါက အသင်တို့သည် ၄င်းတို့အား တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်ကြကုန်။ ဤသည်မှာ သစ္စာတရားကို ဆန့်ကျင်ပယ်လှန်သူတို့ ၏ အကျိုး ရလဒ်ပင်တည်း။ ( ကုန်အာန် ကျမ်း၂း၁၉၁ )
အထက်ပါအာယသ်တော်မှ ” ၄င်းတို့ ” ဟူသည်ကို ” မုစ်လင်မ် မဟုတ်သူများ ” ဟု အချို့က ဝေဖန်စောကြောမှုပြုကြ၏။ စင်စစ်၌မူ ဖော်ပြပြီးသောပါဒတော် (၂း၁၉ဝ)မှ လူတို့အား ဆို လိုခြင်း ဖြစ်ပြီး ” စတင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တိုက်ခိုက်သူများ ” ကို ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ တဖန် ” လက်ရဖမ်းဆီးမိရာအရပ်၌ သုတ်သင် လိုက်ကြ ကုန် ” ဟုဆိုထားခြင်းမှာ စစ်တ လင်း ဟူ သည် ကစား ကွင်း မဟုတ်ပေ။ အသက်လုပွဲသာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထားချက်ဖြစ်သည် (၄င်းမှာ စစ်မြေပြင်၏ ဓမ္မတာသာဖြစ်၏)။ သို့သာမက ခုခံကာကွယ်စစ်ဖြစ်ပြီ ဆိုလျှင် ပျော့ညံ့မှု မရှိဘဲ စိတ်ခွန်အား အပြည့်ဖြင့်ရင်ဆိုင်မှသာ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းမှုများ ရပ်တန့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝတ်ပြုကျောင်းတော်၌ပင်မရှောင် ရန်သူများဖက်မှ စတင်တိုက်ခိုက် ပါက ပြန်လည်တိုက် ခိုက်နိုင် ကြောင်း၊ ၄င်းတို့၏ရန်မူချက် မရှိပါက စတင်တိုက်ခိုက်ခွင့်မရှိကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ တွေ့နိုင်ပေသည်။ ၄င်းနောက် ဤသို့ရှေ့ဆက်ဖော်ပြထားပါသည်။
သို့သော် အကယ်၍ ၄င်းတို့မှရပ်စဲပါလျှင် မုချဧကန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အဖန်တလဲလဲ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသနားတော်မူသော – အလွန်တရာညှာ တာထောက် ထားတော်မူသော အရှင်သခင် ဖြစ်သတည်း။ (ကုန်အာန် ကျမ်း ၂း၁၉၂ )
အကယ်၍ ရန်သူများသည် ကျူးကျော်စစ်ကိုရပ်တန့်ပါလျှင် မုစ်လင်မ်တို့သည် ဖန်ဆင်းရှင်၏ ချမ်းသာခွင့် နှင့် ကရုဏာတော်အရ ရန်သူတို့အား ခွင့်လွှတ်ကြရမည့် အကြောင်း နောက်ထပ် ကျင့်ဝတ်တစ်ရပ်ကို ပြက်ပြက်ထင်ထင် ပြသထားပေသည်။ နောက်ထပ်လာသောပါဒတော်မှ ဆိုထား ပြန်သည်မှာ –
ထို့ပြင် အသင်တို့သည် ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းမှု ပပျောက်၍ သာသနာသည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းအတွက် ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် (လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် ရရှိလာ သည့်တိုင်အောင်) ၄င်းတို့အား ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြကုန်။ သို့ရာတွင် အကယ်၍ ၄င်းတို့မှ (စစ်မက်ကို) ရပ်တန့် လိုက်ကြပါမူ ကျူးကျော်စော်ကားတတ်သူတို့ အပေါ်မှတစ်ပါး မည်သည့်ရန်လိုခြင်း မရှိစေရ။ ( ကုန်အာန် ကျမ်း၂း၁၉၃ )
ဤပါဒတော်က ကိသာ့လ်၏ဦးတည်ချက်ကိုထုတ်ပြထားသည်။ ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲလာသူများကို ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်ရန်၊ ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းမှုများ အဆုံးသတ်၍ လွတ်လပ် စွာ ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခွင့် ရရှိသည်အထိ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ အာယသ်တော် (၂း၁၉၂)ရှိ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းကဲ့သို့ ဤပါဒတော်၌ – ရန်သူဖက်မှ ရပ်စဲပါက မည်သည့်ရန်လိုမှုများ မပြုကြရန် အတွက် နှိုးဆော်ထားပေသည်။ သို့ရာတွင် ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေသူများအပေါ် ဆက်လက် စစ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပါဒတော် (၂း၁၉၄)တွင် ကိသာ့လ်နှင့်ပတ်သက်သော အဆုံးသတ်စည်းမျဉ်းကို တင်ဆက်ထား၏။ အစ္စလာမ်မတိုင်မီ အာရေဗျ၏ထုံးတမ်းစဉ်လာ (နှင့်) ကုရ်အာန်က လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် တိုက်တွန်းရာဖြစ်သည့် တားမြစ်ထားသောလများ (နှစ်တစ်နှစ်၏နောက်ဆုံးလေးလတာ) အတွင်း မည်သည့်တိုက်ခိုက်မှုမျှ မပြုကြရ ဟူသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ သို့ဖြစ်ရာ မုစ်လင်မ် တို့အနေဖြင့် စတင်ကျူးကျော်စော်ကားခံရမှသာလျှင် (ထိုလများအတွင်း) ပြန်လည် တုန့်ပြန်ရင် ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
ဂျိဟာ့ဒ်၏ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများက ငြိမ်းချမ်းရေးမှ ပဋိပက္ခအသွင်သို့ ကူးပြောင်းစေမည့် သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်လက်စားချေစစ်ပွဲများသို့ဦးတည်စေမည့် အကြောင်း ရပ် နှင့် ဓလေ့ထုံး တမ်း များကို လက်သင်မခံကြောင်း ဤဥပဒေမှ ပြသထားပါသည်။
မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ြခင်းအယူအဆအား အစ္စလာမ်၊ ခရစ်ယာန် နှင့် ဂျူးဝါဒ၌ မုချ တွေ့ကြရပေမည်။ ဥပမာ ဤဘာသာ တရားသုံးရပ် စလုံးမှလက် ခံထားသည့် တမန်တော် ဒါဝူးဒ် David (အလိုင်)၏ ထေရုပ္ပတ္ထိတော်၌ အားနည်းသူများအပေါ်အနိုင်ကျင့်တတ်သည့် Goliath အား တမန်တော်မှ တိုက်ခိုက် အောင်နိုင်ခြင်းကို ဂုဏ်ပြုဖော်ပြထားပေသည်။ တမန်တော် အိဗ်ရာဟီမ် (အလိုင်)နှင့် မဆက်နွယ်သည့် အခြားဘာသာတရားများ၌လည်း ဂျိဟာ့ဒ်ကို တစ်နည်း မဟုတ်တစ်နည်းဖြင့် တွေ့နိုင်၏။ ဥပမာ အလင်းနှင့်အမှောင် အင်အားစုများ အကြား၌သော်လည်းကောင်း၊ သုစရိုက်နှင့်ဒုစရိုက်ဘက်တော်သားတို့ အကြားသော် လည်း ကောင်း စစ်ပွဲများသည် ထာဝစဉ် ရှိနေရသည်ဟု ဇိုရိုအက်စ်တာ ဘာသာဝင်များမှ ယုံကြည် ထားကြ၏။
ဂျိဟာ့ဒ်ဟူသည် တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ဆွ) ပွင့်ပေါ်လာမှ ခါတော်မှီထွက်ရှိလာသော အယူအဆအသစ်တစ်ရပ် မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားအားလုံးနီးပါး၌ မကောင်းမှုကိုဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်ကောင်းအဖြစ် ပါဝင်လျက် ရှိနေကြပါသတည်း။
လူ့အခွင့်အရေးများ နှင့် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ခြင်း
ကုရ်အာန်၏ပါဒတော် (၂၂း၃၉)ကိုကြည့်လျှင် မုစ်လင်မ်တို့သည် မိမိတို့အပေါ် စစ်ဆင်လာသူများကိုသာ မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ရေးအတွက် တိုက်ခိုက်ခွင့်ရှိ သည်ဟု ပြသထား၏။ ပါဒတော် (၂၂း၎ဝ)က လက်နက်စွဲကိုင်ရသည့်အဆင့်အထိဖြစ်သွားစေသောအကြောင်းရင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖော်ပြနေ၏။
ထိုသူတို့မှာကား ‘ မိမိတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ဖြစ်ပါသည် ‘ ဟု ပြောဆိုကြယုံမျှဖြင့် (အခြား) မည်သည့်အကြောင်းမျှမရှိဘဲ မိမိတို့ နေ အိမ်များမှ မတရားနှင်ထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ကြရရှာသည်။ ( ကုန်အာန် ကျမ်း၂၂း၎ဝ )
လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်အား ကာကွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက် အတွက် ကိသာ့လ် ပြုခွင့်ရှိသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ ဤပါဒတော်၏ထပ်မံဖော်ပြချက်များက မုစ်လင်မ် များ အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အခြားဘာသာတရားများအတွက်ပါ ပါဝင်လျက်ရှိသည်မှာ ထူးခြားလှ၏။ ရှုပါလေ။
စင်စစ်သော်ကား အကယ်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လူတို့အား တစ်ဦးကိုတစ်ဦး/ တစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့အားဖြင့်ကာကွယ်တော်မူခြင်း မရှိပါလျှင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ သည်လည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဝတ်ပြုကျောင်းများသည်လည်းကောင်း၊ ယဟူဒီတို့၏ ဝတ်ကျောင်းများ သည်လည်း ကောင်း၊ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏နာမံတော်များကို များမြောင်စွာ ရွတ်ဆိုလျက်ရှိသော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များသည် လည်းကောင်း ဖြိုဖျက်ခြင်း ခံကြရမည်မှာ အမှန်ပင်။ ( ကုန်အာန် ကျမ်း- ၂၂း၄၁ )
တဖန် အကယ်၍များ မုစ်လင်မ်တို့သည် ဂျိဟာ့ဒ်၌ ရန်သူများအပေါ်အောင်နိုင်သွားခဲ့လျှင်ပင် ရန်သူဖြစ်ခဲ့ကြသူတို့အား နှိပ်စက်ကလူပြုခြင်း၊ မဆင်မခြင် မောက်မာခြင်းအမှုမျိုးမှ ကင်းစွာ ရှောင်ကြဉ်ကြ၍ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ထူထောင်ကြရန်၊ သူဆင်းရဲနှင့်အကြပ်အတည်းကြုံရသူများ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကို မြှင့်တင်ပေးရန်၊ အန္တရာယ်များကို ပယ်လှန် အားထုတ်ပြီး လူထုကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက် ကြရန် ပါဒတော် (၂၂း၄၁) နှင့်တစ်ကွ အခြား မုက္ခပါဌ်တော်အများအပြား၌ ညွှန်းဆိုထားပေသည်။
ပါဒတော် (၉း၅) နောက်ကွယ်မှ ဒဏ္ဍာရီများကို ရှင်းလင်းခြင်း
ကိသာ့လ်ဆိုင်ရာ ကျမ်းဂန်စာသားနှင့် သမိုင်းကြောင်းတို့အား မဆိုစလောက်မျှ လေ့လာခြင်းသည် အစ္စလာမ်သာသနာရှိ လက်နက်စွဲကိုင်အားထုတ်ရမှု၏ ဦးတည် ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ကျင့်ဝတ် စည်းမျဉ်းများကို နားလည်မှုလွဲချော်သွားစေသည်ချည်း ဖြစ်၏။ အားလုံးကိုဖော်ပြလျှင် ကျမ်းလေးမည် ကို စိုးသည့်အတွက် ၄င်းတို့အနက် အစွန်းရောက် မုစ်လင်မ်များ နှင့် မုစ်လင်မ် မဟုတ်သူဝေဖန်ရေးသမားများ – နှစ်မျိုးလုံးမှ ခံတွင်းတွေ့လှစွာသည့် မုက္ခပါဌ်တော်အား အဓိကထားရှင်းလင်းပါအံ့။
သို့ဖြစ်ပေရာ ထူးမြတ်သောလများကုန်လွန်သွားသောအခါ အသင်တို့သည် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်အခြားအရာများကို ယှဉ်တွဲ ကိုးကွယ်ကြသူတို့အား တွေ့ရာအရပ်၌ သတ်ဖြတ်ကြကုန်။ ၄င်းပြင် ထိုသူတို့အား ချုပ်နှောင်ထားကြကုန်။ ၄င်းပြင် ၄င်းတို့ ပုန်းအောင်း တတ်ရာနေရာတိုင်းတွင် စောင့်ဖမ်းကြကုန် . . . ( ကုန်အာန် ကျမ်း၉း၅ )
မုစ်လင်မ်အစွန်းရောက်ဝါဒီများက ဤမုက္ခပါဌ်တော်ကို တလွဲအသုံးချ၍ – မုစ်လင်မ်တို့သည် သွေဖည်ငြင်းဆန်သူတို့အား (အပြစ်မဲ့ မုစ်လင်မ်မဟုတ်သူများပါမကျန်) အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်ကြရ မည်ဟုဆိုကြ၏။ အစ္စလာမ့်ရေးရာဝေဖန်ရေးသမားတို့ကလည်း အစ္စလာမ်သာသနာသည် ကာဖိရ်တို့အား သတ်ဖြတ်ရန် တွန်းအားပေးထားသော ရုန်းရင်းကြမ်းတမ်းသည့် ဘာသာတရားအဖြစ် ဤပါဒတော်ကိုပင် ခုတုံးလုပ်ကာ ရုပ်လုံးဖော်ကြပြန်၏။
ဤပါဒတော်အား တလွဲအသုံးချသူတို့ထံ မဟာအမှားအယွင်းကြီး ရှိနေပါသည်။ ဤအာယသ်တော်၌ ‘ သို့ဖြစ်ပေရာ ‘ ဟု စတင်ထား၏။ သဒ္ဒါရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အရေးပါသော ကနဦးစာသားများနှင့် အချိတ်အဆက်ရှိနေကြောင်း ထင်ရှားနေ၏။ ပါဒတော်(၉း၅)သို့ ပြန်လည်ခြေရာကောက်ကြည့်သော် ၄င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ပါဒတော်လေးရပ် (၉း၁-၄) အား တွေ့ကြရ ပါမည်။ ယင်းအာယသ်တော်လေးရပ်အား လေ့လာကြည့်ပါက အသင်သည် အစ္စလာမ့် သမိုင်းကြောင်း စိုးစဉ်းမျှပင် မသိရှိစေကာမူ ၄င်းစူရဟ်/ကဏ္ဍ တစ်ရပ်လုံး၏ သဘောကို ရိပ်စားမိနိုင်ပေမည်။
ပါဒတော်(၉း၁)သည် ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်ထိုအရှင့်စေတမန်တော်တို့မှ ဘုရားအများ ကိုးကွယ်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ပဋိညာဉ်ပျက်ပြယ်ကြောင်း ကြေငြာချက်ဖြစ်၏။ သမိုင်းကြောင်းအရ ယင်းပဋိညာဉ်ကို ဟုဒိုင်းဗီယဟ် စာချုပ်ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ၄င်းစာချုပ်၌ ဆယ်နှစ်အထိ စစ်မဖြစ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားချက်ပါဝင်သည်။ ပါဒတော် (၉း၂-၃)သည် ယင်းမုရ်ှရစ်က်များကို တိုင်းပြည်အတွင်း လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်နှင့်အတူ (ပဋိညာဉ်ချိုးဖောက်မှုအပေါ် နောင်တရရန်) အချိန်ပေးထားခဲ့သည်။ အာယသ် တော်(၉း၎)၌ စစ်မက်ကြေငြာမှု၏အကြောင်းရင်းကို ဤသို့ ဖော်ပြထားသည်။
အကြင် (ပဋိညာဉ်ချိုးဖောက်သော) မုရ်ှရစ်က်တို့မှတစ်ပါး အသင်တို့နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ခဲ့ကြကုန်သည့် (အခြား) မုရ်ှရစ်က်တို့သည် အသင်တို့ နှင့်ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ဝတ္တရားပျက်ကွက်ယုတ်လျော့စေကြသည်မဟုတ်။ အသင်တို့အပေါ်ဆန့်ကျင်သည့် မည်သူ့ကိုမျှ ကူညီခဲ့ကြ သည်မဟုတ် . . ( ကုန်အာန် ကျမ်း ၉း၎ )
အထက်ပါ (၉း၎)အရ (၉း၅)၌ ယင်းပဋိညာဉ်ကိုချိုးဖောက်သည့်၊ ၄င်းပြင် မုစ်လင်မ်အသိုင်းအဝိုင်းအား အန္တရာယ်ပြုနေသော ရန်သူ့ဘက်တော်သား မုရ်ှရစ်က်များကို စစ်ဆင် ရန် ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်သဖြင့် ပါဒတော်(၉း၅) တစ်ခုတည်းကိုသာ ကွက်၍ ဖြတ်ယူဖော်ပြလိုက်ခြင်းက မုစ်လင်မ် တို့သည် မုရ်ှရစ်က်ဆိုသည်နှင့် ရန်သူမိတ်ဆွေ မခွဲခြားဘဲ ထာဝရစစ်ဆင်နေရမည်ကဲ့သို့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အဓိပ္ပါယ် ထွက်သွားပါသည်။
ရှေ့ဆက်လာသည့်ပါဒတော် (၉း၆-၁၆)များ၌ မုစ်လင်မ်များသည် ပဋိညာဉ်အပေါ်မှန်ကန်စွာ ရပ်တည်ကြသည့် မုရ်ှရစ်က်များကို လေးစားကြရမည့်အကြောင်း၊ ပဋိညာဉ်ချိုးဖောက်ခဲ့ကြ ကုန် သည့် မုရ်ှရစ်က်များကိုပင်လျှင် မိမိတို့၏ကတိကဝတ်များပြန်လည်စောင့်ထိန်းရန် လိုအပ်သည်ထက် အချိန်ပိုပေးထား ကြောင်း ငြင်း၍ မရအောင် တွေ့ကြရမည်တည်း။
ပါဒတော် (၉း၂၉)၏ ဆိုလိုရင်း
ယင်းအာယသ်တော်၌ ရှေးကျမ်းရသူများအနက် နိစ္စသစ္စာအားလက်မခံသူ၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်- နောက်ဆုံးနေ့တော် နှင့် ကျင့်ဝတ်ဥပဒေအား ငြင်းပယ်သူတို့သည် ဂျိဇ်ယဟ် မည်သော ကင်းလွတ်ခွင့်အခွန်ကို မထမ်းဆောင်သမျှကာလပတ်လုံး တိုက်ခိုက်ရန်ဖော်ပြထား၏။ အချို့သူတို့က မုစ်လင်မ်နယ်မြေအတွင်းနေထိုင်ကြသော ဂျူး နှင့် ခရစ်ယာန်များအပေါ် ဂျိဇ်ယဟ် အခွန်မဆောင်လျှင် မုစ်လင်မ်တို့မှ တိုက်ခိုက်ရမည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်မှားနေကြ၏။ အမှန်မှာ ဤအခွန်အားဖြင့် မုစ်လင်မ် မဟုတ်သူများကို အစ္စလာမ့်စစ်တပ်၌ စစ်မှုထမ်းခွင့်မှ ကင်းလွတ်စေ လိုက်ခြင်းဟု ဟဒီးဆ်တော်များတွင် ၄င်း၏ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းစွာဆိုထားပေသည် (မုစ်လင်မ်မဟုတ်သူတို့မှာ မိမိ မယုံကြည်သော ဘာသာတရားအတွက် စစ်မှုထမ်းရန် မလိုအပ်ချေ)။
အစ္စလာမ့်နယ်ပယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော မုစ်လင်မ်မဟုတ်သူ လူ့အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကိုပါ ကာကွယ်ပေးနေသည့် အစ္စလာမ့်တပ် မတော် အားထောက်ပံ့ရေး၌ ယင်းအခွန်ငွေကို အသုံးပြု ပါသည်။ သို့ပင်သို့ငြား မိမိ၏မိသားစုကိုပင် လုံလောက်စွာ မထောက်ပံ့နိုင်သည့် မုစ်လင်မ်မဟုတ်သူများမှာမူ ဂျိဇ်ယဟ်အခွန်ပေးဆောင်ရန် မလိုပါချေ။
ဤပါဒတော်သည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သက်တော်ထင်ရှားရှိဆဲ (ဝဟီခေတ်ကာလ) အတွင်း မုစ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး၌ ဂျူး နှင့် ခရစ်ယာန်တို့မှကူညီနေကြသော မုရ်ှရစ်က်များအပေါ် စစ်ဆင်ခြင်း အကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဘာသာတရားအချင်းချင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေ ထိုင်ရေး အတွက် ဖိတ်ခေါ်ထားသော (၆ဝး၈)ကဲ့သို့ ပါဒတော်များအား ဤပါဒတော်က မထိခိုက်စေပါလေ။
တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ အရင်းနှီးဆုံးဆွေသဟာတော်ကြီး နှင့် အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၏ပထမဆုံး ခလီဖဟ်ကြီး အဗူ ဗက်ရ် (ရဿွိ)သည် စစ်စည်းကမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါကဲ့သို့ သွန်သင်ခဲ့ သည်။
၁။ ဖြောင့်မတ်သောလမ်းမှသွေဖည်ခြင်း/သစ္စာဖောက်ခြင်း မပြုရ
သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့သည် စစ်ရှိန်မြင့်စဉ်ကာလအတွင်း အစ္စလာမ့်တပ်မတော်မှ စွန့်လွှတ် ကျောခိုင်းထွက်ပြေးခြင်း မပြုကြရန်၊ စစ်မြေပြင်၌ သပ်က်ဝါတရားကိုလက်ကိုင်ပြု၍ တိုက်ခိုက်ကြ ရန်၊ မတရားမှုအား ရင်ဆိုင်တော်လှန်ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင်က မတရားညှင်းဆဲသူများ ပြန်လည်ဖြစ်မသွားကြစေရန် သွန်သင်ချက်ဖြစ်သည်။
၂။ ရုပ်အလောင်းများကို ပျက်လိုဖျက်ဆီး မပြုရ
ဤသွန်သင်ချက်က ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုအဆုံးသတ်စေ၍ လွတ်လပ်မှုကို ဖော်ဆောင်ပေး သည်။ သေသူရော ရှင်သူများအပေါ် သိက္ခာချခြင်းလုပ်ရပ်မျိုး လုပ်ခွင့်မရှိပါ။
၃။ သက်ကြီးရွယ်အို၊ ကလေးသူငယ် နှင့် အမျိုးသမီးများကို မသတ်ဖြတ်ရ
ဤအဆုံးအမ၌ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မရှိသည့်/မသန်စွမ်းသူ အမျိုးသားများလည်းပါဝင်နေသည်ဟု ပညာရှင်များကဆိုကြ၏။
၄။ စားပင်သောက်ပင်များအား မဖျက်ဆီးရ
ဂျိဟာ့ဒ်သည် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းကို နိဌိတံစေခြင်းဖြစ်ရာ မုစ်လင်မ်တို့သည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်တစ်ကွ စားသောက်ကုန်ရိက္ခာများအား အကာအကွယ် ပေးကြရ မည်။ သို့မှသာ နယ်ခံတို့သည် ရောဂါဘယ သို့ မဟုတ် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဒဏ်မှ ကင်းလွတ်မည်ဖြစ်၏။
၅။ ရန်သူတို့၏စားနပ်ရိက္ခာများကို မခိုးယူရ
ခိုးဝှက်ခြင်းကို သိက္ခာမဲ့လုပ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်တားမြစ်ထားသည်။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းသည် ခိုးဝှက်မှုကို တရားဝင်ဖြစ်သွားစေသည် မဟုတ်ပါ။
၆။ ဘာသာပေါင်းစုံမှ သာသနာ့ခေါင်းဆောင်များကို ကာကွယ်ပေးရမည်
ကိသာ့လ်၏ရည်ရွယ်ချက်၌ လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ထူထောင်ရေးလည်း ပါဝင် သောကြောင့် မုစ်လင်မ်တို့သည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် သာသနာရေးဆိုင်ရာ အထွဋ် အမြတ် ထားရာများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရပါမည်။
တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ဆွ) နှင့် လက်မွန်မဆွ ရှေးဦးပထမမုစ်လင်မ်မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တို့၏ ကျင့်ကြံမှုများမှ အခြားစစ်စည်းကမ်းများကိုလည်း အစ္စလာမ့်ဥပဒေပ ညာရှင်တို့က အောက်ပါ အတိုင်းပြဌာန်းထားသည်။
၁။ လက်စားချေစစ်ပွဲ မဆင်နွှဲရ
မုစ်လင်မ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရေး၊ ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းမှု ပပျောက်ရေး နှင့် သာသနာ့ လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် မဟုတ်ပါက စတင်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခွင့် မရှိပါ။
၂။ နိုင်ငံ/ဒေသ၏ခေါင်းဆောင်သာလျှင် စစ်ကြေငြာခွင့်ရှိသည်
အစ္စလာမ်နိုင်ငံ/ဒေသ၏ခေါင်းဆောင်မှ တရားဝင်စစ်ကြေငြာမှု မရှိဘဲနှင့် ထိုးစစ်ဆင်ခွင့် မရှိကြောင်း အစ္စလာမ့်ပညာရှင်များမှ အဆိုညီကြ၏။ လျှပ်တစ်ပြက် တိုက်ခိုက်ခြင်း နှင့် မကြေငြာဘဲ စစ်ဆင်ခြင်းတို့ကို အကြွင်းမဲ့ တားမြစ်သည်။ သို့ရာတွင်လည်း နယ်မြေဒေသ၏ တရားဝင်ခေါင်းဆောင် မရှိခဲ့လျှင် ဖိနှိပ်ညှင်းပန်း ခြင်းနှင့်မတရားစော်ကားခြင်းတို့အား တုန့်ပြန်ခုခံရန် အတွက် ယေဘူယျအားဖြင့် ခွင့်ပြုထားပါသည်။
၃။ ရန်သူများကို အစ္စလာမ်ဖက်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
စစ်ပွဲမစတင်မီ အစ္စလာမ့်တပ်မတော်သည် ရန်သူများကို အစ္စလာမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ရမည်။ ၄င်းတို့မှ လက်ခံလျှင် ရန်ငြိုးရန်စအပေါင်းကို သင်္ဂြိုလ်ပစ်ရပါမည်။ ယခင်က ရန်သူများဖြစ်လင့်ကစား ယုံကြည်ချက်၌ ညီအစ်ကိုများ ဖြစ်သွားကြပေမည်။ အစ္စလာမ့်ဥပဒေပါရဂုအများအပြား၏အဆိုအရ စစ်မက်အဆုံးသတ်နိုင်ရေးအတွက် စစ်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး ယင်းသို့ ဖိတ်ခေါ်ရန် ကြိုးပမ်းကြရမည်ဖြစ်၏။
၄။ ကောင်းမြတ်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်တွဲလျက် အားထုတ်ပါ
ကိသာ့လ်ကို လူထူကောင်းကျိုးအတွက်သာ ဆောင်ရွက်ရ၏။ မည်သည့်စစ်အမျိုးအစား၌မဆို သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ခေါင်းပုံဖြတ် ရယူခြင်းကိစ္စ မျိုးအား ပြင်းထန်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။ ရောင်းသူရောဝယ်သူပါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ကုန်သွယ်စီးပွား အားဖြင့်သာ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်ရောင်းဝယ် ခွင့်ရှိသည်။ ၄င်းပြင် ယင်းအရင်းအမြစ်သည် ကာလတို အတွက်သာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်လင့်ကစား ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အသုံးပြုမရအောင် ဖန်တီးခြင်းတို့ကို မပြုရပါ။ ၄င်းတို့မှာ သိက္ခာမဲ့လုပ်ရပ် များ သာဖြစ်ကြ၏ (၄း၂၉ – ၃ဝ )။
၅။ နယ်မြေချဲ့ထွင်ခြင်း နှင့် ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်းအလို့ငှါ စစ်မဆင်ရ
မုစ်လင်မ်တို့သည် တရားမျှတမှုတည်းဟူသော အကြောင်းခံအတွက်သာ ကိသာ့လ်ကို ဆောင်ရွက်ရ၏။ ယင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဟုတ်ဘဲ နယ်မြေချဲ့ ထွင်သိမ်းပိုက်ခြင်းအတွက်မူ အလျဉ်း ခွင့်ပြု မထားချေ။
၆။ ရေတွင်းရေကန် နှင့် စားသောက်ကုန်များ၌ အဆိပ်မခပ်ရ လက်ရှိခေတ်၏အစ္စလာမ့်ဥပဒေပညာရှင်များစွာတို့က ဤစည်းမျဉ်းသည် ခေတ်ပေါ်စစ်ပွဲများမှ ဓာတုနှင့်ဇီဝ (အဆိပ် သင့် စေသော) လက်နက်များ အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း တားမြစ်ထားကြောင်း လက်ခံထားကြသည်။
ကိသာ့လ် နှင့် အစ္စလာမ့်ဥပဒေ
အစ္စလာမ်သာသနာမှပြဆိုထားသော ကိသာ့လ်၏ ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများ နှင့် ရည်ရွယ်ချက် အား ဆွေးနွေးရာတွင် ကိသာ့လ်မှာ လွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးခွင့် မရှိကြောင်း၊ အစ္စလာမ့်ဥပဒေ လမ်းကြောင်း (ယှရီအဟ်)၏ ဦးတည်ချက်ဘောင်အတွင်း၌သာရှိကြောင်း နားလည်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
ဂျိဟာ့ဒ်အကြောင်းကို သုံးသပ်စဉ်းစားသောအခါ အောက်ဖော်ပြပါဥပဒေအချက်အလက် များအား နှလုံးသွင်းထားရပေမည်။
၁။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု ရှိရမည်
အစ္စလာမ့် အချို့ဥပဒေများ၏နောက်ကွယ်၌ ထင်ရှားပြတ်သားသည့် အကြောင်းရင်း အကြောင်းခံ ရှိရသည်။ ဝက်သားစားခြင်းကိုတားမြစ်မှုကဲ့သို့သော အချို့ဥပဒေများမှာမူ အကြောင်းရင်းခံ မလိုချေ။ ကိသာ့လ် ဆိုင်ရာဥပဒေ၌ တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ရေးဟူသည့် အကြောင်းခံ ရှိနေလေသည်။ ထို့ကြောင့် ပြတ်သားသည့် ဦးတည်ချက်များ နှင့် ကောင်းမြတ်သင့်လျော်သော အကြောင်းရင်းခံ မရှိပါလျှင် ကိသာ့လ်အားဖော်ဆောင်ရန် အကြောင်းမရှိချေ။
၂။ လူထုကောင်းစားရေးမူဝါဒကို မြှင့်တင်ပေးရမည်
အစ္စလာမ့်ဥပဒေများက လူထုကောင်းကျိုးကို မြေတောင်မြှောက်ထားသည်။ ဥပမာ – သာသနာ၊ အသက်၊ မိသားစု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် အသိတရားတို့အား တန်ဖိုးထားကာကွယ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိသာ့လ်သည် ဤရည်ရွယ်ချက်များအား အထမြောက်စေရန်ဖြစ်ရမည်၊ ယင်းအချက်များအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာစေမှု အလျဉ်း မဖြစ်ရပါ။
၃။ ကောင်းကျိုး နှင့် ဆိုးကျိုးကို ချင့်ချိန်ရမည်
ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရေးအတွက် မကောင်းမှုတစ်ခုခုအား ရွေးချယ်ဖို့ကြုံဆုံရလျှင်ပင် ယင်းမကောင်းမှုကို ရှောင်ကြဉ်လိုက်ဖို့ကိုသာ အစ္စလာမ့်ဥပဒေက ညွှန်းပြထား၏။ ကိသာ့လ်၏ စည်းမျဉ်းသည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်။ အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းက အကျိုးအမြတ်ရယူခြင်းထက် သာမြတ်ပါသည်။
၄။ လူထုလုံခြုံရေးကို အကာအကွယ်ပေးရမည်
အစ္စလာမ့်ဥပဒေက လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ အဓမ္မမှု နှင့် ကယ်ကူရာမဲ့ အခြေအနေများမှ အကာအကွယ်ပေးထားသည်။ လူထုလုံခြုံရေးအား ချိုးဖောက်ခြင်း သည် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်သင့်၏။ လူထု၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုပျက်ပြားစေသည့် ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ပရမ်းပတာ သတ်ဖြတ်ခြင်း စသောလုပ်ရပ် မျိုးမှာ ကိသာ့လ်၌ လုံးဝမပါဝင်ချေ။
၅။ ကာလံဒေသံ၏အရှိတရားကို နားလည်လက်ခံရမည်
ခေတ်နှင့်အညီဖြစ်တည်နေသော အရှိတရားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသည့် စည်းစံနစ် ကျကျနည်းစဉ်အပေါ် အစ္စလာမ့်ဥပဒေအား တည်ဆောက်ကျင့်သုံးရလေရာ – ကိသာ့လ်၌လည်း ခေတ်သစ် ကမ္ဘာ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အဖြစ်မှန်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
သာသနာ့အာဇာနည် (ယှဟီဒီ) ဟူသည်မှာ
ကိသာ့လ်၏ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ တရားသောစစ်၌ တိုက်ခိုက်ယင်း ကျဆုံးသူများမှာ ယှဟီးဒ် ဟူသော ဂုဏ်ထူးဂုဏ်မြတ်ချီးမြှင့်ခံရ၏။ ၄င်းကို လျော့တိလျော့ရဲ ဘာသာပြန်ဆိုရပါလျှင် သာသနာ့ အာဇာနည် ဟူ၍ ဖြစ်၏။ အရဗီအသုံးအနှုန်းအရ ” သက်သေပြုထားပြီးသူ ” ဟူသည့် ၄င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ပိုမိုသင့်မြတ်နေပေသည်။ ယှဟီဒီ (အာဇာနည်)တစ်ဦးအဖို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးအလို့ငှါ သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်အသက်ဘဝအား စွန့်လွှတ်စတေးမှုဖြင့် သစ္စာတရားကို မျက်မှောက်ပြု ရပ်တည်လိုက်ရာရောက်သောကြောင့် ဖြစ်၏။
ကိသာ့လ်၌သာမဟုတ်၊ စစ်မြေပြင်မှာသာမဟုတ်၊ အာဇာနည်ဘဝကို မည်သည့်နေရာမှာမဆို ရယူနိုင်၏။ မည်သည့်မုစ်လင်မ်ပင်ဖြစ်စေ လောကကောင်းကျိုးအတွက် ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာ အားထုတ် ဖော်ဆောင်ယင်း သေဆုံးကွယ်လွန်ပါက ယှဟီးဒ် အဆင့်သို့ရောက်၏။ အလားတူစွာ အသက်ဘဝ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဂုဏ်သိက္ခာကောင်း နှင့် အထွဋ်အမြတ်ထားရာများအား ကာကွယ်သောဖြစ်စဉ်အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သော် ယှဟီးဒုလ်အာခိရဟ် အဖြစ် ဂုဏ်ပြုခံရပေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ လောကီရေးရာအချီးမွမ်းခံရရေးအတွက် မဟုတ်ဘဲ အလ္လာဟ့်နှစ်မြို့မှုအတွက် သာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းသောနှလုံးသားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရင်ဆိုင် အားထုတ်သူများသာလျှင် ယှဟီဒီအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ ဤအချက်ကို ဟဒီးဆ်တော်၌ ပြတ်သားစွာဖော်ပြထားပါသည်။
အကောင်းဆုံးကိစ္စအပေါ် မိမိ၏အသက်အား စတေးခဲ့ကြသည့် အစစ်အမှန်အာဇာနည်တို့မှာ နောင်တမလွန်ဘဝဝယ် အမြင့်မားဆုံးအစားပေးဆုလာဘ်ကို ရရှိကြကုန်၏။ ဖန်ဆင်းရှင်သည် ယှဟီဒီတို့၏ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တော်မူ၏။ သုခဘုံ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အား ချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူပြီး ကြားဝင် အသနားခံပေးနိုင်သည့် အခွင့်အရေးကိုလည်း ပေးသနားတော်မူမည်ဖြစ်သည်။
တမန်တော် မုဟမ္မဒ်(ဆွ) နှင့် သာဝကတော်များသည် လက်နက်စွဲကိုင်အားထုတ်ရသည့် ဗဟိဒ္ဓ ဂျိဟာ့ဒ်ထက် အတ္တအားအနိုင်ယူရသည့် ဝိညာဉ်မြှင့်တင်ရေး အဇ္ဈတ္တဂျိဟာ့ဒ်ကို ပိုမို အလေးပေးခဲ့ကြကုန်သည်။ စစ်သည်တော်တစ်ဦးသည် ရဲရင့်ကြံ့ခိုင်ရမည့်အပြင် စည်းကမ်းလိုက်နာတတ်သည့်အကျင့်သီလလည်း ပိုင်ဆိုင်ရပေမည်။ သို့သာမက မိမိ၏ လုပ်ရပ်တိုင်းကို ဖန်ဆင်းရှင်က အခါမလပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေတော်မူသည်ဟူသော အသိတရားလည်း အတူယှဉ်တွဲ ရှိနေရပေမည်။
ကလဲ့စားကို တရားမျှတမှုဖြင့် အနိုင်ယူပါ
တစ်ခါက ခလီဖဟ် အလီ (ရဿွိ)သည် စစ်ပွဲတစ်ခုတွင် မိမိ၏ရန်သူအား မြေပြင်ပေါ် ကိုင်ပေါက်လှဲသိပ်နိုင်ခဲ့၏။ ဓါးကိုမြှောက်၍ခုတ်သတ်မည်ပြုရာ ရန်သူက သူ၏မျက်နှာအား တံတွေးဖြင့် ထွေးလိုက်လေ၏။ အလီသည် ခေတ္တမျှတုန့်ဆိုင်းသွားပြီး ဓါးကိုပစ်ချကာ ၄င်းသူအား လွှတ်ပေးလိုက်လေ သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူ၏နှလုံးသားမှာ တရားမျှတမှုမဟုတ်ဘဲ ဒေါသနှင့်ကလဲ့စား၏ အတုန့်အလှည့်ကြောင့် ညစ်ထေးသွားမည်ကို စိုးရိမ်၍ဖြစ်ပေသည်။ ဤသည်မှာ ကိသာ့လ်အတွင်းမှ မုစ်လင်မ် စစ်သည်တော်၏ အစစ်အမှန်အောင်မြင်မှုတည်း။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၌ ကြုံတွေ့နေရသော ပေါက်လွှတ်ပဲစား အပြင်းစားစစ်ပွဲအချို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး မုစ်လင်မ်လောကနှင့်အနောက်တိုင်းအကြားရှိ ကွက်လပ်ကို တံတား ခင်းနိုင် ရန် ပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံရေး သမားတို့မှ ကြိုးစားလျက်ရှိကြ၏။ ဤကိစ္စ၌ ဂျိဟာ့ဒ်သည် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေပါသည်။
ဤအကြောင်းအရာအား အပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန်မှာ အခြားကဏ္ဍများထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေး နက်နဲပါသည်။ ဆက်လက်ဖော်ပြမည့် အခြေခံအယူအဆများက နားလည် မှုလမ်းကြောင်းထံ ဦးတည်ပေး ပါလိမ့်မည်။
ကုရ်အာန်ကဖော်ပြထားသည့် ဂျိဟာ့ဒ်၏တရားမျှတမှုကို အစွန်းရောက်မျက်မှန် တပ်၍ဖတ်သောအခါ ကြောက်စရာအသွင်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ အချို့စစ်သွေး ကြွအုပ်စုများသည် မိမိတို့၏ တိုက်ပွဲများ အရှိန်မြင့်လာစေရန် ကုရ်အာန်မှပါဒတော်များကို လိုရာဆွဲ၍ (၄င်းတို့၏အယူအဆအား) အတည်ပြုနိုင်အောင် ကြိုးစား တတ်ကြ၏။ ယင်းသို့သောအုပ်စုများက ၄င်းတို့၏ ယုံကြည်ချက်နှင့်လမ်းစဉ်ကို လူအများမှ အမှန်ဟု ထင်မြင်စေရန် ကုရ်အာန်ဋီကာဖွင့်အတတ်ပညာ အချက်အလက် အချို့အား အလွဲသုံးစားပြုလေ့ရှိကြ၏။ ၄င်းမှာ ရုပ်သိမ်းပယ်ဖျက်ပြီးသည့် အာယသ်တော် များဟု အသိများကြသော ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် ကနဦးပြဌာန်း ချက်ဆိုင်ရာအာယသ်တော်များကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ကုရ်အာန်ရှိအစ္စလာမ့်ဥပဒေများမှာ အဆင့်လိုက်ပြဌာန်းချက်ဖြင့် သတ်မှတ်လာခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မုစ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်း အခိုင်အမာဖြစ်ပြီးနောက်ဝယ် နောက်ဆုံး အဆင့်ပြဌာန်း ချက် သည် ကနဦး ပြဌာန်းချက်များအား လွှမ်းမိုးလေ့ရှိပေသည်။ နောက်ဆုံးပြဌာန်းချက်ကိုသာ အတည်ပြုဥပဒေအဖြစ် ကျင့်သုံးရ ပေသည်။ ဂန္ထဝင်ဋီကာရှင်များသည် မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒနှင့်အမြင်ပေါ်မူတည်၍ ဖွင့်ဆိုခြင်း မရှိခဲ့ကြပါ။ အစွန်းရောက်ဋီကာရှင်များကမူ (၉း၅)(၉း၂၉)ကဲ့သို့ ပါဒတော်များဖြင့် မုစ်လင်မ်တို့သည် မုစ်လင်မ် မဟုတ်သူတို့အား တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရမည်ဟု ဆိုလာ သောအခါ – ၄င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အာယသ်တော်များ၊ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံမှုထူထောင်ရေး အခြားအာယသ်တော်အပေါင်းတို့ကို (၄င်းတို့သဘောဖြင့်) ပလပ်ပယ်ဖျက် ပစ်ရာရောက်နေပေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ၄င်းတို့သည် ကိသာ့လ်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို ကျောခိုင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ တဖန် ၄င်းတို့သည် ဂျိဟာ့ဒ်၏ သမိုင်း ဆိုင်ရာနောက်ခံအချို့ကို ခုတုံးလုပ်အမြတ် ထုတ်လိုက်ကြပြန်ရာ ယနေ့ခေတ် ကာလတွင် ဂျိဟာ့ဒ် အား နားလည်အောင်ရှင်းပြဖွင့်ဆိုရန် ခက်ခဲကုန်တော့သည်။
တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ခေတ်သမယ နှင့် နောက်ထပ်မျိုးဆက်တို့၏ခေတ်သမယအတွင်းရှိ မုစ်လင်မ်တို့သည် အန္တရာယ်ကြီးမားလှစွာသော အချိန်ကာလ နှင့် နေရာဒေသများ၌ နေထိုင်ခဲ့ကြရ သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထိုစဉ်က သက်ဦးဆံပိုင်ပဒေသရာဇ်စံနစ်ကြီးစိုးနေပြီး နယ်မြေချဲ့ထွင်ရေးကိုသာ အဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းနေ သောခေတ် ဖြစ်နေသည်။ မုစ်လင်မ်တို့သည်လည်း ” အနိုင်ရအောင်ယှဉ်ပြိုင်ရင်ဆိုင်မည်လော – ခေါင်းငုံ့သိမ်းပိုက်ခံမည်လော ” ဟူသည့် အနေအထား၌ ရောက်ရှိနေ ခဲ့ကြကုန်၏။ ယင်းသမိုင်းကြောင်း၏ အရှိတရားကို မုစ်လင်မ်တို့မှ ယဉ်ကျေးမှု ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ပြုရာဝယ် မိမိကိုယ်ကိုကာ ကွယ်ရေး နှင့် အစ္စလာမ့်စည်းမျဉ်းရှိ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အရ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြခြင်းသာဖြစ်လေသည်။
ယင်းသို့သောအခြေအနေ၌ နေထိုင်ရှင်သန်ကြသော အစ္စလာမ့်ပညာရှင်အချို့ (အများစုမဟုတ်)သည် အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားရာဒေသအားလုံးကို ဒါရုစ် စလာမ် (ငြိမ်းချမ်းရေးဘုံ)ဟု လည်းကောင်း၊ ထိုဒေသများမှအပ အခြားနယ်မြေတို့ကို ဒါရုလ်ဟရာမ် (စစ်မက်ဇုံ)ဟု လည်းကောင်း အယူအဆချဲ့ထွင် လိုက်ကြကုန်၏။ စင်စစ် ယင်းအယူအဆသည် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏သွန်သင်မှု၌ မပါဝင်ပါ။ ခေတ်ပြိုင်အခြားပညာရှင်များကမူ ဤသတ်မှတ်ချက်ကို လက်သင့်မခံကြယုံမက အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရာဒေသများကို ဒါရုလ်အိစ်သိ ဂျာဗဟ် (အစ္စလာမ့်ဖိတ်ခေါ်မှုကို လက်ခံထားသူတို့၏မှီတင်း နေထိုင်ရာ)ဟု လည်းကောင်း၊ ထိုဒေသများမှအပ အခြားနယ်မြေတို့ကို ဒါရုလ်ဒအ်ဝဟ် (အစ္စလာမ်ဖက်သို့ ဖိတ်ခေါ်သင့်သူ တို့၏နယ်မြေဒေသ)ဟုလည်းကောင်း ဆိုခဲ့ကြကုန်၏။
လက်ရှိခေတ်၏လူသားမျိုးနွယ်တို့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးစံနစ်သစ် တစ်ရပ်၌ နေထိုင်ရှင်သန်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့မုစ်လင်မ်အများစုက နားလည်ကြ၏။ သို့သော် အစွန်းရောက်အုပ်စုများက ဖော်ပြပြီးသော သီအိုရီအား ဖက်တွယ်ထားဆဲဖြစ်၏။ ၄င်းတို့သည် လောကတစ်ခွင် လုံးကို စစ်ဆင်ရာဌာနအဖြစ် ရှုမြင်နေကြကုန်၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ် ၄င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော တိုင်းနိုင်ငံဟူ၍ ကမ္ဘာပေါ်၌ ရှိမနေခြင်းကြောင့်တည်း။ အနောက်တိုင်းမှ နိုင်ငံရေးတရားဟောပြော သူအချို့၏ ” အသင် (မုစ်လင်မ်)တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူရှိနေ သူများ(ကျွန်ုပ်တို့ ၏ဘက်တော်သားများ) သို့တည်းမဟုတ် အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ ဘက်တော်သားများသာ ဖြစ်ကြ ကုန်၏ ” ဟူသောပြောဆိုချက်က မီးလောင်ရာလေပင့် ဖြစ်သွားပါတော့သည်။
မုစ်လင်မ်လောကတွင်နေထိုင်သူများစွာတို့သည် လောကီကိုမိမိတို့၏ဘဝနှင့်ယှဉ်ထိုး၍ ကမ္ဘာ လောကကြီးကို စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာအတိပြီးသော၊ အနှစ်မဲ့သော၊ သေးသိမ် ယုတ်ညံ့သော နေရာဌာနအဖြစ် ခံစားချက် ရှိနေကြ၏။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုသည်လည်း (အဓိကမဟုတ်သော်လည်း) အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်နေပေသည်။
ရှေ့ဆက်ဆိုရလျှင် ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ မုစ်လင်မ်များမှာ မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင် စံနစ်ဆုံးရှုံး၍ လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်အနိုင်ကျင့်ခံရမည့်အဖြစ်ကို အလျဉ်းမ လိုလားကြချေ။ မိမိတို့၏အစိုးရသည် နိုင်ငံပိုင်သယံဇာတများအား ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုလိုက်သည့်အတွက် မုစ်လင်မ်တို့မှာ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ နှင့် လူထုကောင်းကျိုးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံဆုံနေရသည်ဟု (ယင်းသို့သောနိုင်ငံသားတို့မှ) အမြင်ရှိနေကြပေသည်။
တဖန် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက ဒီမိုကရေစီ နှင့် လွတ်လပ်မျှတမှုအကြောင်းကို ဟောပြောရာတွင် ရံဖန်ရံခါ၌ အစ္စလာမ့်လောကရှိ မှန်ကန်နေသည့်လှုပ်ရှားမှုများအား မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ဝေဖန်လိုက်တတ်ကြ၏။ စင်စစ် မုစ်လင်မ် ကမ္ဘာရှိ (ဝေဖန်ခံရသည့် အချို့) လှုပ်ရှားမှုများမှာ ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်မှု နှင့် တရားမျှတခြင်း အပေါ်သာ အခြေခံထားသည်ဖြစ်သောကြောင့် များစွာသောမုစ်လင်မ်တို့အဖို့ အမျက်ထွက်စရာ ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ကုရ်အာန်က အောက်ပါကဲ့သို့ သတိပေး ထားပါသည်။
အို – လူသားအပေါင်းတို့။ အသင်တို့၏စည်းဖောက်ကျူးလွန်မှုသည် အသင်တို့အပေါ်၌သာ ပြန်လည်သက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါအံ့။ ( ကုန်အာန် ကျမ်း ၁ဝး၂၃ )
သို့ဖြစ်ရာ ဤအရေးအရာများကို (မုစ်လင်မ်ဟုတ်သော၊ မုစ်လင်မ်မဟုတ်သော) အစွန်းရောက်အုပ်စုများက တရားမျှတမှု မရှိသည့် – ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမဲ့သည့် နည်းလမ်းတို့ဖြင့် မိမိတို့၏ နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်များအတွက် တွင်တွင်ကြီး အသုံးချနေကြပေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မုစ်လင်မ်တော်လှန်ရေးသမား နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားတို့ကို ဝါးလုံးရှည်ဖြင့် သိမ်းကျုံးရမ်းရိုက်နေခြင်းက မတရားလှပါလေ။ နိုင်ငံများစွာ၌ မုစ်လင်မ်တို့သည် တရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်ခြင်းကို လိုလား၍ မိမိတို့၏ လွတ်လပ်မှု နှင့် အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင် နေကြသည်။ မတရားမှုကိုတော်လှန်သည့် ကောင်းမြတ်သောအမှုကိစ္စများ၌ လူပေါင်းများစွာ ပါဝင်နေကြ၏။ ၄င်းမုစ်လင်မ်တို့ကိုလည်း အစွန်းရောက်သမားများ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်ဝါဒီများဟု တလွဲတချော် ကင်ပွန်းတပ်လာကြ၏။ စင်စစ် ယင်းအခေါ်အဝေါ်တို့မှာ အတိုက်အခံများအား သိက္ခာချရန်၊ အတိုက်အခံတို့၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး/မူဝါဒ နှင့် အယူအဆအတွေးအမြင်များအား ရှုတ်ချနိုင်ရန် ထွင်လုံးဆင်လိုက်သည့် နိုင်ငံရေးဝေါဟာရများသာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သမ္မတ ကနေဒီမှ ဤသို့ပြောဖူး၏။
” ငြိမ်းချမ်းစွာတော်လှန်ပြောင်းလဲခွင့် မပြုစေခြင်းက သွေးချောင်းစီးတော်လှန်ရေး အဖြစ် သို့သာ မုချ ဖြစ်ပေါ်သွားစေသည် ”
ဂျိဟာ့ဒ် ဟု နိုင်ငံရေးသမားတို့မှ မှားယွင်းစွာ ဖွင့်ဆိုထားသော အစွန်းရောက်ဝါဒကို အမှန်တကယ် ပပျောက်စေလိုပါလျှင် – မုစ်လင်မ်တို့နှင့်လက်တွဲ၍ အစွန်းရောက် ဝါဒကို အားပေးနေသော နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်ဆိုးများအား ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ အခြားလောကနှင့် မုစ်လင်မ်လောက နှစ်ရပ်လုံး၌ တရားမျှတခြင်း၏ ပုံရိပ်ပေါ်လွင်လာပါမည်။
အဆုံးသတ်သော် ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေပါသည်။ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်က သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အား နာမ်ပိုင်းသစ္စာတစ်ရပ်ကို ဤသို့ နှိုးဆော် ထားပေသည်။
မုချဧကန် လူမျိုးတစ်မျိုးသည် ၄င်းတို့၏အခြေအနေကို ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် မပြောင်းလဲသမျှ ကာလပတ်လုံး အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်က ပြောင်းလဲပေး တော်မူမည် မဟုတ်ချေ။ ( ကုန်အာန် ကျမ်း ၁၃း၁၁ )
( USA မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထုတ်၊ မုစ်လင်မ်မဟုတ်သူများအကြား Best Selling ဖြစ်ခဲ့သော Sohaib Nazeer Sultan ၏ The Koran (Quran) For Dummies စာအုပ်မှ ဂျိဟာ့ဒ်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကို ဘာသာပြန်ဆိုတင်ပြခြင်း ဖြစ်သည် )
ဆောင်းပါးတွင်ပါရှိသော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို လေ့လာလိုလျင်
ကုရ်အာန်ဘာသာပြန် ၂ အုပ်တွဲ PDF Version
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် အာရဗီနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် လေ့လာလို့လျှင် http://tanzil.net/
မမေးလည်းဖြေ(၉)- အကပ္ပိယ အသားများ (သို့) မစားသင့် မစားအပ်သောအသားများ (Aug 21, 2012)
အီဂျစ်တွင် ကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ကုရ်အာန် ရွတ်ဖတ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာမှ တတိယဆုရ (Aug 18, 2012)
အစ္စလာမ့် အေးရိပ်ဆာယာသို့(၅)- သာတူညီမျှ မုစ်လင်မ်တို့ဘ၀ (Aug 10, 2012)
ပထမဆုံးသော ရှေးဟောင်း တရုတ်ဘာသာပြန် ကုရ်အာန် ရှာဖွေတွေ့ ရှိ (Aug 9, 2012)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ပထမဆုံး ပန်ဂျာဘီ ဘာသာပြန် ထွက်ရှိ။ (Aug 6, 2012)
ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ကုရ်အာန် မကြာမီ ပြီးစီးမည် (Aug 6, 2012)
မမေးလည်းဖြေ(၈)- ဗလီဝတ် ကျောင်းတော်နှင့် ဝတ်တက်နှိုးဆော်သံ ဆိုတာ ဘာလဲ? (Aug 4, 2012)
မမေးလည်းဖြေ (၇) – နွားသတ်တာ ရက်စက်မှုတဲ့လား (Jul 24, 2012)
အတိတ်က ဆွိယံမ် (My Fast In The Past) (Jul 23, 2012)
မမေးလည်းဖြေ (၆)- ကျိန်ဆဲခြင်းလော? (Jul 19, 2012)
← ကြားဖြတ်သတင်း – စစ်တွေ လက်မချေရွာကိုရခိုင် အစွန်းရောက်များတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစား …
13 comments on “ဂျိဟာ့ဒ် ဆိုင်ရာ ကုရ်အာန့်ရှုထောင့်”
yooetar January 7, 2013 at 2:55 pm	Reply
အမယ်လေး။။။။။။ အစ္စလာမ် ဘုရားတဲ့ စစ်ပွဲထဲမှာပါ ဝင်ပါနေပါ့လား ကြောက်စရာဘာသာရေးအစစ်ပေတည်း။ အခုမှဆီလျော်အောင် လိုရာတွေဆွဲပြီးဘာသာပြန်မနေနဲ့ ဘယ်သူမှမယုံဘူး ။ ယုတ္တိလည်းမရှိဘူး ။ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုတာဒါဘဲ ဘယ်တော့မှမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်မရှိဘူး ။ ဘယ်သူမှမယုံလည်း သူတို့ဘာသာမှန်ကြောင်းရှင်းပြနေရတဲ့ ဘာသာရေးဘဲ။
rakshakrakhine January 8, 2013 at 2:25 am	Reply
မင်းယုံတာ မယုံတာ အရေးမကြီးဘူး။မင်းတို့ မယုံရင်လည်း မင်းတို့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေ။ဒါပေ့မယ် မင်းတို့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ဘယ်လောက်ပဲမုန်းမုန်း အစ္စလာမ် က ကမ္ဘာတည်နေသရွေ့ ရှိနေမယ် ဘာသာဖြစ်တယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ဘာသာပျောက်မှကိုလည်းစိုးရိမ်းစရာမလို အမျိုးပျောက်မှစိုးကြောက်စရာလည်း မလိုသော သာသနာဖြစ်တယ်။
yooetar January 7, 2013 at 3:04 pm	Reply
အစ္စလာမ် bloggers တွေရဲ့အလုပ်ကဒါဘဲ သူတို့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခုခံငြင်းချက်ထုတ်နေရတာက အဓိကအလုပ်ဘဲ။ မယုံရင်ကြိုက်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘလော့ကိုဝင်ကြည့် သနားကမားရှင်းပြလိုက် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ရှင်းပြလိုက် တောင်းပန်လိုက် ခြီမ်းခြောက်လိုက် ဒါသူတို့ဘာသာရေးဘဲ။ အဓိကဘာသာရေးလမ်းကြောင်းလုပ်တဲ့အလုပ်က ၁ ဘာသာဝင်မလျော့ပါးရေး ၂ ဘာသာဝင်တိုးပွားရေး
yooetar January 7, 2013 at 3:14 pm	Reply
အပေါ်က (အကပ္ပိယအသားများမှာလည်းကြည့်အုံး) အမြဲဘဲခုခံခြင်းချက်ထုတ်နေတာတွေရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်မရှင်းပြနိုင်ရှာဘူး အခြေအမြစ်ကမရှိတော့။ သူများဘာသာကို ခုတုံးလုပ်ပြပြီး သူတို့မှန်ကြောင်းရှင်းပြနေရတာသနားစရာတောင်ကောင်းနေပြီ။
yooetar January 7, 2013 at 3:18 pm	Reply
နားလည်လည် မလည်လည် ရွတ်ဖတ်ပုံမှန်ရွတ်တာကို ဂုဏ်ယူတဲ့နေရာမှာလည်းအစ္စလာမ်ထိပ်ဆုံးဘဲ။ ရွတ်ယုံတော့ ကြက်တူရွေးသင်ပေးလည်းတတ်တယ်
rakshakrakhine January 8, 2013 at 2:47 am	Reply
မင်းတို့ ကော မင်းတို့ ဘာသာကိုနားလည်လိုလား ၁၀၀မှာ၉၉ .၉၉ကနားမလည်သူတွေ အမှန်ဆိုရင်မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး ။ မင်းတို့ သံဃာဘာသာဝင်ဆိုရင် ပိုမှန်ကန်လိမ္မည်။မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဝိနည်းနှင့်ဘယ်လောက်ပဲဆန်ကျင့် ဆန်ကျင့် သံဃာကဒါဆိုဒါပဲ လိုက်ယောင်သူတွေသာဖြစ်တယ်။သူများလူမျိုးသူများဘာသာကို မုန်းတီးတရားချီးမြှင့်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံဆော်အားပေးသူတွေက ထေရာဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခံယူတာ တော်တော်ရှက်စရာပေ။
rakshakrakhine January 8, 2013 at 3:45 am	Reply
ကြက်တူရွေးက အပြစ်ကင်းစင် မနာလို မလိုတမာစိတ်မရှိတော့ကြက်တူရွေးကိုသင်ပေးရင် တတ်ရင်တတ်သွားလိမ္မည်။မင်းတို့ ကို သင်ပေးလည်းတတ်မှမဟုတ်ဘူး။မင်းတိုနှလုံးသားတွင် မစ္စရိယစိတ်အပြည့်ကိန်းအောင်းနေလိုပေ။ကမ္ဘာ့လူမျိုးအသီးသီးအစ္စလာမ်ဘသာဝင်တိုင်း ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို ပီပီသသရွတ်နိုင်တယ်။အသံရော စာသားရော ကွဲလွဲခြင်းမရှိ။
yooetar January 7, 2013 at 3:31 pm	Reply
နွားသတ်တာတော့ မင်းတို့အတွက်ဘယ်မှာရက်စက်မှုဆိုနိုင်အံ့နည်း အကြောင်းမူကား ဘာသာမတူလျှင်လူပင်သတ်ရန် ကုန်အန်ကညွှန်ကြားထားပြီဘဲ။ ကုန်အန်မူရင်းမှာ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းမသတ်ရ ဟုရေးထားတာကို အခုမှလူမသတ်ရဟုရေးထားသည်ဟုဗြောင်လီမ်နေတာလေ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဝါး ဟ ဟာ ဟား ရယ်လိုက်ရ
rakshakrakhine January 8, 2013 at 3:25 am	Reply
မင်းတို့ ဝက်သတ်တာကျတော့။ဝက်ကိုမသတ်ပဲနဲ့ ဝက်သားဘယ်လို့ စားနိုင်မလဲ။မွတ်စလင်၏အဓိပ္ပါယ်ဘယ်နစ်မျိုးရှိလဲမင်းတို့ မှမသိတာ။ ယုံကြည်ချက်မှန် ဒုစရိုက်ကိုရှောင် သုစရိုက်ဆောင်သူကိုလည်း မွတ်စလင်လို့ ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့ မွတ်စလင်အချင်းချင်းသတ်စရာမလိုတောတာ။မွတ်စလင်မှာ တိုက်စစ်ကိုခွင့်မပြု ခုခံစစ်ကိုသာခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီခုခံစစ်မှာစည်းကမ်းချက်မြောက်များစွာရှိသေးတယ်။
yooetar January 7, 2013 at 3:35 pm	Reply
ကျိန်ဆဲခြင်းလော ဆိုတာ အစ္စလာမ်ဘာသာကနေပြောင်းသွားတဲ့လူတွေ ဝန်ခံသွားတာမှအများကြီး ဟုတ်မဟုတ်မင်းလည်းသိမှာပါ အခုမှဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေလှောက်ရေးနေရတာ တကယ်ပါ သနားတယ်လို့။
nu moha January 8, 2013 at 3:55 am	Reply
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုဒါ ပုံပြင်တွေ ဒဏ္ဍာတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ ဆိုဒါလူတိုင်း သိတယ် မင်းတို့မှာဘာအထောက် အထားမှလည်း မရှိဘူး ထေရဝါဒ ကိုးကွယ်ဒါ မင်းတို့တစ် နိုင်ငံ ပဲရှိတယ် တောမှာမွေးတဲ့ စူပါကုလား ကိုကိုးကွယ်တဲ့ မင်းတို့ကို သနားတယ်
buddiesrakhine1979 February 9, 2013 at 3:29 pm
အော်…ဒိတ္ထိတွေ… ဒိတ္ထိတွေ မင်းတို့လည်း မင်းတို့ အလာလို အ၀ီစိငရဲကို တန်းဆင်းမဲ့ကောင်းတွေဘဲ.
buddiesrakhine1979 February 9, 2013 at 3:22 pm	Reply
၁၉၈၅ခုနှစ်က အနောက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ရာဝါပန်ဒီမြို့အနီးရှိ ဘားမားကိုလိုနီကျေးရွာတွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များအား မူဆလင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (RLO) ဥက္ကဌအာမတ်ရှား ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း
(တစ်ဖက်နိုင်ငံ၏ မြို့နှင့်ကျေးရွာအချို့တွင် အူရဒူဘာသာ၊ ဘင်္ဂလီဘာသာတို့ဖြင့် လက်ကမ်းစာစောင်များဖြန့်ဝေခဲ့သည်)
သင်တို့နေထိုင်ရာဒေသတွင် အစာရေစာများချို့တဲ့လျက်ရှိသည်၊ သင်တို့နှင့်ကပ်လျက် မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆန်စပါး စာနပ်ရိက္ခာ စားမကုန်နိုင်လောက်အောင် စုပုံလျက်ရှိသည်၊ လမ်းဘေးရေဘုံဘိုင်များတွင်လည်း တိုင်းရင်းသူ လှပျိုဖြူသမီးပျိုများ ရေခပ်လျက်၇ှိသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်၊ သင်တို့အစာရေစာ ၀လင်အောင်စားသောက်ဖို့ ထိုနိုင်ငံသို့သွားနိုင်သည်၊ ထိုဒေသရှိ တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးလှလှလေးများကို အိမ်ထောင်ပြုပြီး အစ္စလမ်သာသနာ ပြန့်ပွားအောင်လုပ်နိုင်ကြသည်။
နောက်ပြီး သင်တို့သည် မယူကမ်းပေါ်တွင်ရှိသော မွတ်ဆလင်ဘာသာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားများကို ထိုဒေသမှ ထွက်သွားအောင် နည်းမျိုးစုံကို အသုံးပြုပြီး နှင်ထုန်ကြရမည်၊ ထိုနေရာများကို သင်တို့က အစားဝင်နိုင်အောင် လုပ်ရမည်၊ ထိုဒေသများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အမာခံနယ်မြေများ ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ကြရမည်၊ နောက်ပြီး သင်တို့ကို ထိုဒေသရှိတိုင်းရင်းသားတို့က ပြန်လည်ခုခံပါက ထွက်မပြေးကြပါနှင့် အလာအရှင်မြတ်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် မသတ်နိုင်ပါ………
ဒီမိန့်ခွန်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘင်္ဂလီကုလားများသည် နယ်မြေပိုင်စိုးရေးနှင့် ဘာ သာလွှမ်းမိုးရေးကို တစ်ပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ယုတ်မာကောက်ကျစ်သော ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးဖြင့် ကြံစည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ကို ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပါ။